राष्ट्रपति सीको भ्रमण : हाम्रो खुशी र गौरवको दिन « Naya Page
राष्ट्रपति सीको भ्रमण : हाम्रो खुशी र गौरवको दिन
प्रकाशित मिति : 12 October, 2019 10:18 am
बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । बाटोघाटो व्यापारमात्र होइन, मानिस–मानिसबीचको सम्बन्ध गाढा बनाउन, चेतना बढाउन, एक–अर्काको भावना जित्नका लागि पनि हो । पर्यटक, यात्रुको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने भोलि सहयोग त नेपाललाई नै पुग्छ । नेपाल संसारका निम्ति आकर्षणको केन्द्र बन्दै छ । सबैको विश्वास जित्दै छ । विश्वभरका मानिस एकपटक नेपाल पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठानिरहेका छन् । यो हाम्रालागि उज्ज्वल भविष्य र गौरवको कुरा हो ।
कतिपय देश पर्यटकले मात्र आर्थिक समृद्धि गरेको हामीले देखेका छौँ । हामीसँग पर्यटकीय महŒवसँगै अन्य उत्पादनका सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोगको त्यति नै महŒव छ । यो भ्रमणका बेला पनि नेपाल–चीनबीच केही दीर्घकालीन सम्झौता हुनेछ । दीर्घकालीन महŒवका परियोजनामा सम्झौता हुने तयारी भएका छन् । यसले नेपाल र चीन दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ । चीनको राम्रो पक्ष के हो भने, उसले आफूले मात्र सम्बन्ध बढाउने भन्दैन । अरूसँग पनि त्यत्तिकै मात्रामा राम्रो सम्बन्ध राख्नुस् भनेर सुझाव दिने गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । चीनले संवेदनशीलता हेरेर लगानी गर्ने गरेको छ । तथापि काम गर्दै जाँदा केही त्रुटि र कमजोरी हुन्छ नै । त्यो जसबाट पनि हुन्छ । चीनको लगानी रहेका केही परियोजनामा ढिलाइ भयो भनेर गुनासो सुनिन्छ तर त्यहाँ हाम्रो कमजोरी पनि जोडिएको छ ।
यो रिङरोड निर्माणकार्य पनि कति तीव्र गतिमा भइरहेको थियो, हामीले जग्गा अधिग्रहण गर्नमा ढिलाइ गर्दा काममा सुस्तता भयो । आफ्नै कारणले काममा ढिलाइ भएका बेला पनि अरूलाई दोष दिनु त उचित हुँदैन । आफ्नो कमजोरी र त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ । नियम कानुनको पूर्ण पालना गरेर नै हामीले विकास गर्ने हो । चीनले आर्थिक समृद्धि कायम गरेको पनि नियमबद्ध तरिकाले नै हो । हामीले चीनबाट धेरै कुरा सिक्नेक्रममा छौँ । उसको विकासको बाटोलाई पछ्याउन सक्छौँ । चीनमा अहिले एक अर्ब ४३ करोड जनसङ्ख्या छ । त्यहाँको केही नागरिक नेपाल आउँदामात्रै नेपाल पर्यटकीय रूपले ठूलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यो हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ ।
मैले दर्जनौँपटक चीनको भ्रमण गरेको छु । सम्बन्ध राखेर केही बिगँ्रदैन । पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्धले देशको सम्बन्ध राम्रो बनाउन मद्दत पुग्छ । कोहीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध बनेको देखेर हल्का आलोचना गरेको सुनिन्छ । तर, त्यो आवश्यक छैन । चिनियाँ पार्टीसँग हाम्रो भ्रातृत्व सम्बन्ध उहिलेदेखिको हो । चीनले आफ्नो विचार निर्यात गर्न चाहँदैन । हामीले पनि कसैको विचार आयात गर्न आवश्यक छैन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शनलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न चाहेका छौँ ।
समाजमा कस्ता–कस्ता वर्ग बस्छन्, तिनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ, त्यसको व्याख्या गर्न, समाजमा कस्ता अन्तरविरोध विद्यमान छन् ? संसारलाई चिन्न र आफूलाई चिन्ने चश्मा हो त्यो । हेर्नेमात्र होइन, रूपान्तरण गर्ने सिद्धान्त पनि हो । “पहिले चिन अनि बदल । रोगको पहिचान गर अनि निदान गर” भन्ने सूत्र प्रयोग गर्न चाहेका छौँ । हामीले पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाएसँगै देश–देशबीचको सम्बन्ध पनि बनाउन त्यति नै महव दिएका छौँ । जनता–जनताबीच, पार्टी–पार्टीबीच, सङ्गठन–सङ्गठनबीचको सम्बन्ध राम्रो भएमा देशको सम्बन्ध बनाउन टेवा पुग्छ । चीनको एउटा सिद्धान्त छ, “पहिले समस्या पहिचान गर अनि काम गर ।” समस्याको पहिचानै नगरी समाधान कसरी खोज्ने ? सामाजिक न्याय, समानताको सिद्धान्त लागू गर्न चाहेका छौँ । सबैको शिर ठाडो होस्, सबैका छोराछोरी पढ्न पाऊन्, योग्य र सक्षम होऊन् । कोही धनी कोही गरिब नहून् भन्ने हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य मान्यता हो । ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा नपरून्, एकल महिला पुरुष समस्यामा नपरून्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समस्यामा नपरून्, गरिब, अल्पसङ्ख्यक कसैको जीवन कष्टपूर्ण नहोस् भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । समाजवादको मान्यतालाई हामीले आत्मसात् गरेका छौँ ।
हामी निजी, सहकारी र सार्वजनिक सिद्धान्त अङ्गीकार गरेर अघि बढेका छौँ । यो समाजवादको यात्रा हो । यसबाट कोही आत्तिनुपर्दैन । समाजको हितका लागि हो यो । कसैका विरुद्धमा हामी छैनौँ । अन्याय अत्याचार, विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा छौँ । के यो कसैको अहितमा छ र ? कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट कोही तर्सिनुपर्ने आवश्यक छैन । हामी खुला समाजको पक्षमा छौँ तर नाङ्गो र विकृत समाजको पक्षमा छैनौँ । राम्रो संस्कार, राम्रो आचरण र व्यवहारको पक्षमा छौँ । हामीले लिएको विचार र नीतिबाट कोही आत्तिनुपर्दैन । तत्कालीन राजा महेन्द्रले भनेका थिए, “कोदारीको बाटोबाट मोटर चढेर कम्युनिज्म आउँदैन ।” अहिले हामीले बीआरआई प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । यसबाट पनि आत्तिन आवश्यक छैन । रेलको बाटो भएर सी चिनफिङ सिद्धान्त नेपाल आउने होइन । संसारलाई जोड्ने, व्यापार प्रवद्र्धन गरी सम्बन्ध जोड्ने परियोजना हो बीआरआई ।
भ्रमणबारे सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ । आजदेखि राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुँदै छ । यस अवसरमा हामी नेपाली अत्यन्त खुसी र गौरवान्वित भएका छौँ । सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्ध दरिलो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । सम्बन्ध गहिरो होस्, समझदारीको जग बलियोमात्र होइन, अझ विश्वसनीय बन्ने मेरो विश्वास छ । दुई देशको सम्बन्ध अझ उचाइमा पुगोस् । विश्वास र साझेदारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन्छ । सबै हिसाबले यो भ्रमण सफल होस् । दुई देशबीचको युगीन सम्बन्ध अझ भरपर्दो, सुमधुर भई नयाँ उचाइमा पुगोस् । नेपालीको महान् चाड दशैँको अवसरमा भइरहेको यो भ्रमणले थप खुसी र गौरव बढाएको छ । म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
(पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालको यो आलेख गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं । यो आलेख लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित छ)
कश्मीर मामिलामा भारतलाई रुष्ट बनाउँदै टर्कीले लियो पाकिस्तानको पक्ष
चार हजार फिटमाथि दुई बिमान ठोक्किए, सवार सबैको मृत्यु
यस्तो देखियो टुँडिखेलमा ७० औं प्रजातन्त्र दिवस (फोटो फिचर)